मिली ७० ~ मत्ती, मार्क, Lucas, जन, प्रेरित, रोमी, १ कोरिन्थी,2Korintiërs, गलाती, एफिसी, फिलिप्पी, कलस्सी, १ थिस्सलोनिकी, २ थिस्सलोनिकी, १ तिमोथी, २ तिमोथी, तीतस, फिलेमोन, हिब्रू, जेम्स, १ पत्रुस, २ पत्रुस, १ यूहन्ना, २ यूहन्ना, ३ यूहन्ना, यहूदा, प्रकाश
तिनीहरूले आएर येशूलाई यो सोधे, “हामीले आशा गरेका मुक्ति दिनुहुने राजा तपाईं नै हुनुहुन्‍छ कि हामीले अरू कसैको बाटो हेर्नुपर्ने हो?”
र सबै जातिका मानिसहरूले आफ्‍नो आशा यिनकै नाउँमा राख्‍नेछन्।
“ए सर्पहरू र विषालु सर्पका सन्‍तानहरू हो! तिमीहरू कसरी नरकको आगोबाट उम्‍कने आशा राख्‍छौ?
उनीहरूले यूहन्‍नालाई सोधे, “यदि तिमी ख्रीष्‍ट पनि होइनौ एलिया पनि होइनौ अनि हामीले आशा गरेका अगमवक्ता पनि होइनौ भने बप्‍तिस्‍मा किन दिँदै छौ त?”
यस्‍तो शक्तिशाली काम देखेर मानिसहरूले भने, “अवश्‍य पनि संसारमा आउनुहुन्‍छ भनेर हामीले आशा गरेका अगमवक्ता उहाँ नै हुनुहुन्‍छ।”
त्‍यसैले म हृदयदेखि नै खुसी छु र खुसीको गीत गाइरहन्‍छु। मरेर जानुपरे पनि म आशामा बाँचेर जिउँदछु
यो सुनेर उसले केही पाउँछु कि भन्‍ने आशा लिएर हेर्‍यो।
मानिसहरूले बिरामीहरू ल्‍याएर गल्‍लीमा ओछ्यान राखेर सुताइदिन्‍थे। उनीहरूले पत्रुसको छायाँसम्‍म पर्ला भन्‍ने आशा राख्‍थे।
महासभामा सदुकी र फरिसी समूहका मानिसहरू बसेका छन् भन्‍ने कुरा जानेर पावलले ठूलो सोरमा भने, “दाजुभाइहरू हो, म फरिसीको छोरा फरिसी नै हुँ। मरेको मानिस फेरि बिउँतनेछन् भन्‍ने आशा राखेकाले यहाँ मेरो मुद्दा चलिरहेछ।”
तर हजुरले तिनीहरूको कुरा नसुन्‍नुहोस्! किनभने चालीस जनाभन्दा बढी यहूदीहरूले ‘पावललाई नमारी केही पनि नखाने र पानी पनि नपिउने’ भनेर शपथ खाएका छन्। तिनीहरू अहिल्‍यै उहाँलाई मार्न ढुकिबसेका छन् र हजुरको आज्ञाको आशामा पर्खिरहेका छन्।”
मैले तिनीहरूले जस्‍तै असल र खराब गर्ने हरेक मानिस मरेपछि फेरि बिउँतनेछन् भन्‍ने आशा राखेको छु।
फेलिक्‍सले पावलबाट घुस पाउँछु कि भन्‍ने आशा राखेका थिए। त्‍यसैले उनी पावललाई घरीघरी बोलाएर कुराकानी गर्थे।
तर मैले सम्राटलाई उसको बारेमा केही पनि लेख्‍न सकिनँ। यसैकारण मैले उसलाई तपाईंहरूको सामुन्‍ने र खास गरी तपाईं राजा अग्रिपासको सामुन्‍नेमा ल्‍याउन चाहेको हुँ। तपाईंहरूले यसको जाँचबुझ गरिदिनुभयो भने मैले लेख्‍ने कुरो पाउँछु कि भन्‍ने आशा राखेको छु
हे राजा अग्रिपास, त्‍यही प्रतिज्ञा पाउने आशामा हाम्रा बाह्र कुलहरूले पनि दिनरात एक चित्तले परमेश्‍वरलाई पूजा र भक्ति चढाइरहेका हुन्। मैले पनि त्‍यही आशा राखेकोले यहूदीहरूले मलाई दोष लगाएका हुन्।
धेरै दिनसम्‍म हामीले न घाम देख्‍यौं नता तारा नै देख्‍यौं। आँधी जोडले चलिरहेको थियो र आखिरमा बाँचौंला भन्‍ने हाम्रो आशा पनि हरायो।
यो कुरा बुझाउन र तपाईंहरूसँग भेट गर्नको लागि मैले तपाईंहरूलाई यहाँ बोलाएको हुँ। हामी इस्राएलीहरूले आशा राखेका मुक्ति दिनुहुने राजाको निम्‍ति नै म यसरी साङ्लाले बाँधिएको हुँ।”
सन्‍तानको आशै नभएको बेला अब्राहामले धेरै जातिका पुर्खा हुन्‍छु भनी विश्‍वास गरेर आशा राखे। परमेश्‍वरले यसो भन्‍नुभएको थियो, “तिम्रा सन्‍तानहरू ताराझैँ धेरै हुनेछन्,।”
किनभने सृष्‍टि नै काम नलाग्‍ने भएको थियो तर यसो भएको सृष्‍टिको आफ्‍नै इच्‍छाले थिएन। सृष्‍टिले आशा गरिरहोस् भनी परमेश्‍वरले नै यसो गर्नुभएको थियो।
किनभने ठूलो आशाको लागि परमेश्‍वरले हामीलाई बचाउनुभयो अनि हामी त्‍यही आशामा बाँचिरहेका छौं। आशा भनेको हामीले कुनै चीजको लागि पर्खिरहनु हो। मानिसले पहिले नै पाइसकेको कुराको आशा राख्‍तैन।
तर यदि हामीले नदेखेको कुराको आशा राख्‍छौं भने हामीले यसको लागि पर्खन्‍छौं।
धर्मशास्‍त्रमा लेखिएको कुराले हामीलाई शिक्षा दिन्‍छ। हाम्रो आशालाई बढाउन धर्मशास्‍त्रको कुराले हामीलाई सहने शक्ति र उत्‍साह दिन्‍छ।
फेरि अगमवक्ता यशैयाले पनि आउनुहुने ख्रीष्‍टको बारेमा यसो भनेका छन्, “दाऊद राजाको वंशमा एक जना सन्‍तान आउनेछन्, उनी अन्यजातिका मानिसमाथि राज गर्न राजा हुनेछन् अनि अन्यजातिका मानिसहरूले आफ्‍नो आशा उनैमा राख्‍नेछन्।”
म त्‍यही बाटो भएर स्‍पेन जाँदा तिमीहरूलाई भेट्‍ने आशा छ। केही समय तिमीहरूसँग बिताउने इच्‍छा पनि छ। त्‍यस बेला तिमीहरूबाट स्‍पेन देशसम्‍म जाने मद्दत पनि पाउँछु होला।
के उहाँले हाम्रो लागि भन्‍नुभएको होइन? हो, यो हाम्रो लागि भनिएको हो किनभने खेत जोत्‍नेले आशामै जोत्‍छ अनि दाइँ गर्नेले केही पाउँला भन्‍ने आशाले नै दाइँ गर्छ।
मैले यो काम आफैंले रोजेको भए यसबाट म केही पाउने आशा राख्‍थें। तर म यो कामलाई मेरो कर्तव्‍य सम्‍झेर गर्दै छु। परमेश्‍वरले नै यो कामको जिम्‍मा दिनुभएकोले मैले गरें।
सुसमाचारको खातिर नै म यी सब गर्दै छु र यसबाट पाउने आशीर्वाद पनि म पाउँछु भनी आशा राख्‍छु।
प्रेमले सबै कुरा सहन्‍छ, सबै कुरामा विश्‍वास राख्‍तछ, सबै कुरामा राम्रो आशा राख्‍तछ अनि सबै कुरा खप्‍छ।
तर यी तीन कुराचाहिँ सधैँ रहनेछन्— विश्‍वास, आशा र प्रेम। तिनीहरूमा सबैभन्दा ठूलो प्रेम नै हो।
ख्रीष्‍टमा हाम्रो आशा यस जीवनमा मात्र छ र यस जीवनपछि छैन भने हामी सबै मानिसहरूभन्दा दयालाग्‍दाहरू हौं।
किनभने निक्‍लेर थोरै समय भेट्‍ने होइन, तर प्रभुको इच्‍छा भयो भने निकै दिन तिमीहरूसँगै बसौंला भन्‍ने आशा राखेको छु।
परमेश्‍वरको आत्‍माले नै हामीलाई विश्‍वासबाट परमेश्‍वरका अघि ठीक ठहरिने आशाको बाटो हेर्न लाउनुहुन्‍छ।
त्‍यस बेला तिमीहरू ख्रीष्‍टदेखि अलग्‍गै थियौ। तिमीहरू परमेश्‍वरका छानिएका जाति इस्राएलसँग सम्‍बन्‍ध नै नभएको विदेशी थियौ। परमेश्‍वरले प्रतिज्ञाहरू गरेर जोड्‍नुभएको करारमा तिमीहरूको कुनै स्‍थान थिएन अनि संसारमा तिमीहरू बिनाआशा र बिनापरमेश्‍वर थियौ।
परमेश्‍वरले तिमीहरूलाई दिनुभएको आशा एउटै भएजस्‍तै शरीर पनि एउटा हो अनि पवित्र आत्‍मा पनि एउटै हुनुहुन्‍छ।
त्‍यसकारण मूर्ख नबन तर प्रभुले तिमीबाट के आशा राख्‍नुहुन्‍छ, सो पत्तो लगाओ।
मेरो कर्तव्‍यबाट नचुकूँ तर जुनै समय पनि विशेषगरी अहिले म आँटिलो बनेर मरे पनि, बाँचे पनि मेरा सम्‍पूर्ण जीवनले ख्रीष्‍टको आदर होस् भन्‍ने मेरो ठूलो इच्‍छा र आशा छ
प्रभु येशूको इच्‍छा भए आशा छ, म चाँडै तिमोथीलाई तिमीहरूकहाँ पठाउनेछु। र तिमीहरूको खबर पाउँदा मलाई पनि खुसी लाग्‍नेछ।
हेरौं, मलाई के-के हुने हो! ती कुराहरू थाहा पाउनासाथ मैले तिमोथीलाई पठाउने आशा राखेको छु।
तिमीहरूको लागि स्‍वर्गमा सुरक्षासँग राखिएको आशाले गर्दा तिमीहरूले यस्‍तो विश्‍वास र प्रेम गरेका हौ। यो आशाको विषयमा अघिदेखि नै खुसीको सत्‍य सन्‍देशमा तिमीहरूले सुन्‍यौ।
साँच्‍चै तिमीहरू दिगो र बलियो भएर विश्‍वासमा लागिरह। तिमीहरूले सुनेका सुसमाचारको आशालाई छोड्दै नछोड। यही सुसमाचार सृष्‍टिभरिका मानिसहरूलाई सुनाइएको छ। म पावल यही सुसमाचार सुनाउने सेवक भएको छु।
हाम्रा परमेश्‍वर र पिताको सामु तिमीहरूको विश्‍वासबाट गरेको काम र प्रेमले गरेको परिश्रम र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्‍टमा राखेको आशाबाट तिमीहरू दरिलो भएको सम्‍झिरहन्‍छौं।
हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्‍ट आउनुहुने दिनमा हाम्रो आशा, आनन्‍द, घमण्‍ड गर्ने मुकुट जे भने पनि तिमीहरू नै हौ, होइन र?
१ थिस्सलोनिकी ३:११
हाम्रा परमेश्‍वर पिता र प्रभु येशूले नै हामीहरूलाई तिमीहरूकहाँ पुर्‍याइदिनुहुन्‍छ भन्‍ने आशा राखेका छौं।
दाजुभाइहरू, मरिसकेका विश्‍वासीहरूका बारेमा तिमीहरूलाई भन्‍न चाहन्‍छु। अरू आशा नभएकाहरूलेजस्‍तै तिमीहरूले शोक नगर।
तर हामीहरू त दिनका सन्‍तान भएका हुनाले हामी होशमा रहिरहौं। हामीले विश्‍वास र प्रेमको कवच लगाऔं अनि टोपझैँ मुक्तिको आशालाई पहिरिऔं।
हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्‍ट र पिता परमेश्‍वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र उहाँको अनुग्रहद्वारा अन्‍त्‍य नहुने उत्‍साह र असल आशा दिनुभयो।
हामीलाई मुक्ति दिने परमेश्‍वर र आशा दिने येशू ख्रीष्‍टको आज्ञाअनुसार येशू ख्रीष्‍टको प्रेरित भएको म पावल यो पत्र
यो पत्र लेख्‍दा पनि मैले चाँडै आउने आशा राखेको छु।
यो सत्‍यचाहिँ अजम्‍मरी जीवनको आशामा अडिएको छ। कहिले पनि झूटो नबोल्‍ने परमेश्‍वरले सृष्‍टि हुनुभन्दा अघि नै हामीलाई यो जीवन दिन्‍छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो।
यसरी नै आशा राखेको कुरा पूरा हुने दिनको बाटो हामी हेर्दछौं। त्‍यो दिन पूज्‍य परमेश्‍वर र हामीलाई मुक्ति दिनुहुने येशू ख्रीष्‍टको ठूलो सम्‍मान् देखा पर्नेछ।
यसरी उहाँको अनुग्रहले हामी परमेश्‍वरका अघि ठीक ठहरिन सक्‍यौं अनि हामीले आशा राखेका अनन्त जीवनको पनि हकदार हुन सक्‍यौं।
तर ख्रीष्‍टचाहिँ घरको अधिकार पाएको छोराजस्‍तै भरपर्दो हुनुहुन्‍छ। हाम्रो आशामाथि हामीले साहस र भरोसा कायम राख्‍यौं भने हामी परमेश्‍वरका घर हुन्‍छौं।
प्रियहरू, हामीले यसरी बोले तापनि तिमीहरूको बारेमा चाहिँ राम्रो कुराको आशा राखेका छौं। मुक्ति पाएर तिमीहरूले धेरै राम्रा कुराहरू पाउनेछौ।
तिमीहरू सबैको यही जोश आखिरी समयसम्‍म रहिरहोस् र तिमीहरूको आशा पूरा हुनेछ, यही हाम्रो कामना छ।
अब दुई कुरा छन्, जो फेरिँदैनन् र यस विषयमा परमेश्‍वरले ढाँट्‍नुहुन्‍न। यसकारण उहाँकहाँ सुरक्षा लिन जाने हामीहरूको अघि राखिएको आशालाई दिगो भएर समातिरहन हामीले ठूलो उत्‍साह पाउँछौं।
यही आशामाथि हाम्रो जीवन अडिएको छ। यो साँचो र पक्‍का छ। यो स्‍वर्गीय मन्‍दिरको पर्दादेखि महापवित्र स्थानसम्‍म जान्‍छ।
किनभने मोशाको व्यवस्थाले त केही पनि सिद्ध पार्न सकेन। तर अब त अझ असल आशा हामीलाई दिइएको छ, जसले हामीलाई परमेश्‍वरको नजिकै पुर्‍याउँछ।
हामीले राखेका आशा बलियोसँग समातिराखौं किनभने आफूले गरेको प्रतिज्ञा परमेश्‍वरले पूरा गर्नु नै हुनेछ।
विश्‍वास गर्नु भनेको आशा गरेको कुरामा ढुक्‍क हुनु र नदेखेको कुरामा पक्‍का भरोसा गर्नु हो।
तिमीहरू पनि त्‍यसै गरी पर्खेर दह्रो भई बस। आफ्‍नो आशा नमार, प्रभु आउनुहुने दिन नजिकै छ।
हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्‍टका पिता परमेश्‍वरको प्रशंसा होस्। येशू ख्रीष्‍टलाई मरेकोबाट जिउँदो गराएर ठूलो दयाले उहाँले हामीलाई नयाँजन्‍म दिनुभयो। यसैले हामीले जिउँदो आशा पाएका छौं।
उहाँद्वारा तिमीहरूले परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्‍यौ, जसले उहाँलाई मृत्‍युबाट जीवित पार्नुभयो र उहाँलाई महिमा दिनुभयो, यसकारण तिमीहरूको विश्‍वास र आशा परमेश्‍वरमा राख्‍दछौ।
तर आफ्‍ना हृदयमा ख्रीष्‍टको श्रद्धा राख र उहाँलाई आफ्‍नो जीवनको स्‍वामी मान। तिमीहरूभित्र भएको आशाको बारेमा कसैले सोधे भने त्‍यसका बारेमा बताउन तयार बस।
ख्रीष्‍टमा यस्‍तो आशा राख्‍नेहरूले आफूलाई ख्रीष्‍टलाई जस्‍तै चोखो पारेर राख्‍छन्।